वर्षायाममा विभिन्न संक्रमणबाट बच्न यसो गर्नुहोस्, नत्र ज्यानै जाला !:: Artha Dabali
वर्षायाममा विभिन्न संक्रमणबाट बच्न यसो गर्नुहोस्, नत्र ज्यानै जाला !
वर्षायाममा खाना र पानी तथा प्रदुषणका कारण विभिन्न रोगब्याधीहरु, चिसो, रुघाखोकी देखि लिएर फंगल संक्रमण, छालासम्बन्धी समस्या देखिन्छन् । मलेसिया, डेंगु, टाइफाइड, झाडापखला तथा हैजा रोगको संक्रमणको जोखिम पनि उच्च रहन्छ । तसर्थ यी समस्याहरुबाट बच्नको लागि निम्न सावधानीहरु अपनाउन आवश्यक रहेको हुन्छ :
यो मौसममा हेपाटाइटिस र टाइफाइडको जोखिम उच्च रहन्छ । त्यसबाट बच्नको लागि फोहोर तथा सडकमा जथाभावी बेच्न राखिएका खानेकुराहरु नखानु नै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै पानी उमालेर पिउने, बासी तथा सडेगलेको खानेकुरा नखाने गर्नाले यी रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
वर्षाको समयमा पेटको विभिन्न संक्रमण देखिन्छ । खराब खानपानले केवल पाचन प्रणालीमा नोक्सनी पुर्याउनुका साथै ग्यास, एसिडटी तथा कब्जियतको समस्या सिर्जना हुन्छ । गर्मी याममा आउँ, झाडाबान्ता जस्ता समस्याहरु पेटकै संक्रमणका लागि लाग्दछन् ।
त्यसैले पर्याप्त मात्रामा उमालेको पानी पिउने, ताजा खानेकुरा मात्र खाने गर्नुपर्छ । काटेर राखेको लामो समय भैसकेको फल नखाने । पकाएर खानुपर्ने खानेकुरा राम्रोसँग नपाकेको वा काँचो नै छ भने त्यसलाई नखाने, बासी खानेकुरा नखाने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ ।
बर्खामा छालामा फंगल इन्फेक्सन हुन्छ । काखी तथा औँलाको कापमा ढुसीको संक्रमणका कारण घाउ बन्दछन् । यी ठाउँमा स्वच्छ हावा प्रवाह हुन सक्दैन र चिस्यान पनि रहिरहन्छ । जसका कराण ती ठाउँमा ढुसीको संक्रमण हुन्छ र घाउ बन्दछ । यस समस्याबाट बच्नका लागि काखी, जाँघ तथा औँलाको काम जस्ता ठाउँहरुलाई सुख्खा राख्ने, सफाइ गरिहरहने र यससम्बन्धी क्रिम तथा औषधि लगाउने ।
वर्षायाममा जताततै जमेको पानीबाट विभिन्न खालका जिवाणु तथा परजिवीहरु फैलिन्छन् । यी जिवाणु तथा परजिवीहरुमध्ये कतिपयले हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुर्याउछ । त्यसैले वर्षाको समयमा घरबाहिर हिडडुल गरेपछि एन्टी ब्याक्टेरियाल सावुनको प्रयोग गरी नुहाउनु राम्रो हुन्छ ।
नुहाएपछि चिसो कपाललाई आफै सुक्न दिनुपर्छ र भिजेको मोजा तथा जुत्ता लामो समयसम्म लगाउनु हुँदैन । पानी जमेको तथा हिलोमा कुल्चेर नहिडेमा लेप्टोस्पाइरोसिस जिवाणुबाट बच्न सकिन्छ ।
हामीले खाने खाना ताजा र पकाएको तातो हुनुपर्छ । चिसो खाना तताएर खानाले पोषक तत्वहरु पनि नष्ट हुन्छन् र विषाक्त पदार्थहरु सिर्जना हुने डर हुन्छ । खानेकुरा झिँगा तथा साङ्ला आदि नछिर्ने गरी राम्ररी छोपेर राख्ने गर्नुपर्छ । यिनीहरुले रोगका किटाणुहरु खानामा सार्ने जोखिम हुन्छ । खानेकुरा छुनुभन्दा पहिले साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । काँचै खाने कुराहरु राम्रोसँग पखालेर मात्र खानुपर्छ ।
वर्षायामयाममा औलो तथा डेंगु जस्ता रोगका धेरै संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ । पानी जमेको ठाउँमा औलो तथा डेंगु रोग फैलाउने लामखुट्टेको प्रजनन तिब्र हुन्छ । डेंगु तथा औलो दुबै निकै खतरनाक तथा प्राणघातक रोग हुन् । घर आसपासका पानीका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, झाडी बुट्यान तथा फोहोर ठाउँहरु सफाल राख्ने, पोखरी तथा दहहरुमा लामखुट्टेका लार्भाहरु मार्ने विषाक्त औषधि छर्किने, झुल लगाएर मात्र सुत्ने, लामखुट्टे भगाउन स्प्रे तथा गुडनाइट जस्ता औषधिहरु प्रयोग गर्ने तथा छालामा लामखुट्टे प्रतिरोधी क्रिम लगाउने आदि गर्नाले यी रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
वर्षायाममा चिसो तथा रुघाखोकीबाट बच्नका लागि पानीमा नभिज्ने, वर्षायाममा छाता लगायतको ओत लिएर मात्र बाहिर निस्किने, तातो झोलिलो पदार्थ पिउने तथा तातोपानी पिउने गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, लामो समयसम्म चिसो कपडामा नबस्ने र चिसो कपाल पुछेर वा ड्रायरमा सुकाइहालेमा सर्दीबाट बच्न सकिन्छ । एजेन्सी